बोर्डको १९ औं बार्षिक उत्सव सम्पन्न, १९ फिल्मकर्मी सम्मानितFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
बोर्डको १९ औं बार्षिक उत्सव सम्पन्न, १९ फिल्मकर्मी सम्मानित
फिल्मी फण्डा । चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो स्थापनाको २० औं बर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा १९ औं बार्षिक उत्सव सम्पन्न गरेको छ । बोर्डको आफ्नै हलमा बार्षिक उत्सव समारोह सम्पन्न गर्दै १९ फिल्मकर्मी सम्मानित र आउँदो तीन बर्षको कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको उपस्थितीमा बोर्डले बार्षिकोत्सव आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्षहरु यादव खरेल, शम्भुजित बाँस्कोटा, निर शाह, शम्भूजित बास्कोटा, राजकुमार राई, कृष्ण मल्ल, धमेन्द्र मरवैता लगायत उपस्थित थिए । यस्तै दर्जनौं फिल्मकर्मीहरु र चर्चित कलाकारहरु कार्यक्रममा उपस्थित थिए । बोर्डले सेल्यूलाइड प्रविधिमा खिचिएका १० पुराना चलचित्रलाई डिजिटाईजेशन गरेर त्यसको डिजिटल सारांश भिडियो समेत प्रर्दशन गरिएको छ । जसमा ‘आमा, हिजो आज र भोली, जीवनरेखा, के घर के डेरा, सिन्दुर, परिवर्तन, मनको बाँध, कुमारी, बदलिदो आकाश, शान्तिदीप छन् । अन्य चलचित्रलाई पनि विस्तारै डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने बोर्डको योजना बनाएको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले आफ्नै चालमा काम गरिरहेको तर, त्यसको नकरात्मक टिप्पनी हुने गरेको बताएका छन् । उनले आईफा अवार्ड गर्न स्विकृत दिएको तर, बाहिर १ अर्ब सरकारले दिन लागेको भन्दै समाचार तथा टिप्पनीहरु आउन थालेको बताए । आईफा वारे बाहिर आएको समाचारप्रति कुनै सत्यता नभएको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले आईफालाई सरकारले १ रुपैयाँ पनि नदिने जानकारी दिए । स्वदेशी अवार्ड तथा कार्यक्रमलाई सहयोग र विदेशी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहनको नीति सरकारले लिईरहेको उनले बताए । १९ औं बार्षिक उत्सबलाई सम्बोधन गर्दै उनले गत बर्ष दुईवटा काम शुरु गरेको र यस बर्ष पनि दुई वटा काम कम्तीमा शुरु गरिने बताए ।
बक्स अफिसको पूर्ण कार्यान्वयन र डिजिटाईजेशनको काम बोर्डले यस बर्षसम्म गरेको कामको रुपमा ब्याख्या गरे । यस्तै मन्त्री बाँस्कोटाले आगामी आर्थिक बर्षसँगै हलहरुले कम्तीमा १८० दिन अनिवार्य स्वदेशी फिल्म प्रदर्शन गर्नैपर्ने र यसो नगरे उक्त हलमा ताला लाग्ने समेत चेतावनी दिए । यस्तै यहि बर्षबाट काठमाडौंमा सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक ईन्डोर फिल्म स्टुडियो निर्माण गरिने पनि उनले बताए । यो सँगै फिल्म नीति–२०७१ लागु गर्ने पनि उनले बताए । अब क्लीन फिड पनि तदरुकता साथ लागु गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । क्लीन फिडको कुनै ब्याक गेर नभएको र पछि नहट्ने भन्दै कुनै हालतमा लागु गराएरै छाड्ने उनले बताएका हुन् ।
सम्मानित हुनेमा पहिलो नायिका भुवन चन्द, नायक भुवन केसी, नायक शिव श्रेष्ठ, निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्मा, निर्माता छविराज ओझा, संगीतकार शम्भूजित बास्कोटा, नृत्य निर्देशक बसन्त श्रेष्ठ, द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गी, छायांकार मन्जुकुमार श्रेष्ठ, ध्वनी विज्ञ प्रदीप कुमार उपाध्याय, पोस्टर डिजाइनर सुन्दरलाल श्रेष्ठ, फिल्म निर्देशक डा. टोशिआकी इतोह (जापान), चलचित्र पत्रकार विजयरत्न तुलाधर, र विज्ञापन एजेन्सी(आन)का पूर्व अध्यक्ष निर्मलराज पौडेललाई सम्मानित गरिएको थियो । यस्तै, कामना पब्लिकेसनलाई पनि कार्यक्रममा सम्मानित गरेको छ ।
यस्तै तीन विशेष चलचित्रलाई पनि पुरस्कार प्रदान गरेको छ । फिल्म कथा ७२, बुलबुल र गोपिलाई विशेष चलचित्र को पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । यस्तै बोर्डले विभिन्न समितिमा रहेर काम गरेका निर्णायक, समिती तथा सदस्यहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यस्तै बोर्डले तीन कर्मचारीलाई बर्ष कर्मचारीको रुपमा सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेको छ । यस्तै बोर्डले पहिलो पटक चलचित्र प्रदर्शकहरुलाई पनि सम्मान गरेको छ । फिल्म क्षेत्रमा योगदान दिएको भन्दै विश्वज्योती हलका मोशन सर्राफ, क्युएफएक्सका नकिम उद्दिन, विन्धबासिनी हलका उत्तम द्धार र कृष्ण चलचित्र मन्दिरका राज कुमार पोखरेललाई पनि सम्मान गरेको छ ।
कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डले यो बर्ष ३ करोड रुपैयाँ सरकारको सहयोग र १७ करोड आन्तरिक श्रोतबाट उठाउने बताएको छ । बक्स अफिस, न्युनतम प्रदर्शन प्रणाली, ईन्डोर स्टुडियोसँगै नीतिगत कार्यक्रमहरु बेर्डले लगातार रुपमा गर्दै जाने जनाएको छ । अध्यक्ष केशव भट्टराईले फिल्म क्षेत्रमा देखिएका बेथिती हरुलाई थितीमा ल्याएरै छाड्ने बताईएको छ । बोर्डको बार्षिक कार्यक्रमसँगै फिल्ममा देखिएका अन्य समास्याहरु समाधानका लागि शुन्य अवस्थामा रहेर बोर्ड काम गर्न तयार भएको उनले बताए ।
फिल्म क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर काम गर्न सधै नै तयार भएको सुनाउँदै सल्लाह सुझाव भए निर्वाद रुपमा बोर्डमा राख्न पनि उनले अनुरोध गरे । फिल्म क्षेत्रको वारेमा सम्पूर्ण जानकारी तथा समस्याहरुको पहिचान र समाधान सहित फिल्ममा रुची राख्ने वा फिल्म पढ्न चाहनेहरुको लागि दस्तावेजको रुपमा रहने पुस्तक ‘चलचित्र मञ्च’ पनि विमोचन गरिएको छ ।